basy avoakan'ireo andriamby, Pot lasibatry - China CS andriamby
Andriamby fivoriambe / fitaovana
fantsona avoakan'ireo andriamby,
lalina vilany avoakan'ireo andriamby,
ndfeb vilany avoakan'ireo andriamby,
mifono fingotra vilany avoakan'ireo andriamby,
Office avoakan'ireo andriamby,
Water Treatment avoakan'ireo andriamby,
Sintered néodyme avoakan'ireo andriamby,
Neo Block avoakan'ireo andriamby,
Neo Arc / Faritra lasibatry
Neo Varingarin'i avoakan'ireo andriamby,
Neo Disc avoakan'ireo andriamby,
Neo avoakan'ireo andriamby, tsy ara-dalàna
Neo lasibatry Amin'ny Adhesive
Neo Ring avoakan'ireo andriamby,
Neo tontolon'ny / Ball avoakan'ireo andriamby,
basy avoakan'ireo andriamby,
andriamby sivana Water Treatment avoakan'ireo andriamby,
basy avoakan'ireo andriamby, Pot avoakan'ireo andriamby,
NdFeB Pot Magnet amin'ny Eyelet
3M andriamby vilia ho setroka detector
antsapaka haingana basy andriamby tendrombohitra: Gun Magnet (D36x11.5mm) zavatra nataon-mahery Rare Earth Neodymuim avoakan'ireo andriamby, fa very ny 1% na latsaka ny fanindrahindram isaky ny 10 taona. Ny avoakan'ireo andriamby, dia fonosina ao anatin'ny iray fingotra casing amin'ny 2 recessed lavaka ho nitombo sy malefaka vinyl pad. Ny recessed lavaka hahazoana antoka fa ny basy tsy hiditra ao an mifandray amin'ny fitomboan'ny fitaovana. Tsy misy gromets izay harafesina. Gun Magnet amin'ny ambony ary ny tsirairay no mitantana ny andriamby hatramin'ny 25 kilao ny lanjany basy voalanjalanja. Raha manana ...
antsapaka haingana basy andriamby tendrombohitra:
Gun Magnet (D36x11.5mm) zavatra nataon-mahery Rare Earth Neodymuim avoakan'ireo andriamby, fa very ny 1% na latsaka ny fanindrahindram isaky ny 10 taona. Ny avoakan'ireo andriamby, dia fonosina ao anatin'ny iray fingotra casing amin'ny 2 recessed lavaka ho nitombo sy malefaka vinyl pad. Ny recessed lavaka hahazoana antoka fa ny basy tsy hiditra ao an mifandray amin'ny fitomboan'ny fitaovana. Tsy misy gromets izay harafesina. Gun Magnet amin'ny ambony ary ny tsirairay no mitantana ny andriamby hatramin'ny 25 kilao ny lanjany basy voalanjalanja.
Raha manana fepetra fanampiny, dia mifandraisa aminay mivantana, ary ny injeniera no mamaritra ho anao. OEM no ankasitrahany.
Previous: Mifono fingotra Pot avoakan'ireo andriamby,
Manaraka: andriamby sivana Water Treatment avoakan'ireo andriamby,
CS andriamby CO., LIMITED